Nzukọ AfricaOSH 2020 - AfricaArXiv
bipụtara Jo Havemann on 11th nke February 2020 11th nke February 2020
Laa azụ na Eprel 2018, echiche a ga-ewu ebe a na-echekwa ihe ga - emeghe African Open Access na mbido mbụ nke AfricaOSH na Kumasi, Ghana.
E kpuchitere mmalite a na Bekee Ndepụta nke Nature, Quartz Africa, Onye edemede, na French site na Afro Tribune na Courrier International.
Obi dị anyị ụtọ ikwuwapụta, na na nnọkọ AfricaOSH nke afọ a na Yaounde, Cameroon, anyị ga na-aga na ngalaba Open Access.
Gbado anya na DIYBio & Nkwado na 2020
A ga-enwe Nzukọ OSH Africa 2020 na Yaounde, Cameroon, site na 14 ruo 16 Mee 2020, n'okpuru isiokwu a. 'Itolite Mee-Onwe Gị Ma Gị Mee Onwe Gị (Mee N'onwe Gị / DIT) Maka Mgbanwe Obodo'. Ọ ga-akwado ya Mboa Lab.
Mgbakọ a ga-akwado ụlọ akwụkwọ, mkparịta ụka na nnọkọ maka ịme, hacking na DIYBio maka ọtụtụ ndị sonyere itinye aka na usoro nke imewe, imekọ ihe, idozi nsogbu. Ọzọkwa, ndị ga-eme ihe a ga-eme bụ maka otu esi emeghe sayensị na ngwaike nwere ike inye aka na mgbanwe na-adigide n'Africa. Na mmechi anyi na acho imeputa ihe banyere ihe ohuru nke emezigharị nke obodo, nke kwesiri ekwesi, nke teknuzu, enwere ike ina agha, na onodu gburugburu anyi.
Gụkwuo banyere AfricaOSH na africaosh.com.
Mepee uzo nnweta
N'afọ a, ndị otu ndị otu AfricanArXiv ga-eme ka uzo Open Open na AfricaOSH rụ ọrụ.
Anyị ga-ekerịta atụmatụ na nkọwapụta nke egwu ahụ yana ozi mbu na akụrụngwa banyere isi okwu na-agagharị na Open Access na mpaghara Afrịka na njikọ nke agụmakwụkwọ na mpaghara ndị ọzọ.
Anyị ahapụtala mkpọsa nke igwe mmadụ na nyiwe na opencollective.com.
ekpuchi mmefu njem na ebe obibi nke ndị otu otu AfricaArXiv
ime atụmatụ, nhazi, na ederede nke uzo uzo uzo emeghe
nhazi oge na ngwa agha na-akwado ndị otu na-ahazi AfricaOSH na Cameroon
Njem njem erutela ndị sonyere AfricaOSH ahọrọ
Nnukwu Mgbakọ Africa Open Science na Akụrụngwa (Africa OSH) bụ nnukwu mgbalị iji mee ka ndị nchọpụta, teknụzụ, ndị na-ahụ ụzọ aghụghọ, ndị nkuzi, ndị ọrụ gọọmentị, na ndị malitere ihe ọhụrụ gburugburu ụwa. | africaosh.com
Categories:	omumeOpen AccessMepee Sayensi
Tags: AfricaOSHDIYbioMepee Science Hardwarenkwado
Ndị sava Prepul na-ewu ewu na-eche mmechi n'ihi nsogbu ego 'Nature News, 1 Feb 2020, doi: 10.1038 / d41586-020-00363-3 Nke a bụ isiokwu nke akụkọ ụnyaahụ Nature News nke kwupụtara ụgwọ ọrụ ọrụ OSF. AfricArXiv diri ebea GỤKWUO…